Wararka - Sidee looga dhaadhiciyaa macaamiisha inay ku bartaan buug-yaraha fiidiyowga qaab dhinac walba ah oo qoraal gaaban ah?
Buug-yaraha fiidiyowga (ogow: marka la eego mabda'a sheyga, oo sidoo kale loo yaqaan buug-yaraha elektiroonigga ah); buug-yaraha fiidiyowgu waa shey cusub oo ay ku jiraan isku-darka buug-yaraha dhaqanka iyo MP4 video player. Taasi waa in lagu daro LCD fiidiyoow fiidiyoow ah buug-yaraha dhaqameed; sidaa darteed buug-yaraha fiidiyowgu ma aha oo keliya inuu leeyahay hawsha buug-yaraha dhaqameed, laakiin sidoo kale wuxuu u shaqeynayaa ciyaaro sawiro ama fiidiyowyo.
Cabbirka LED-ka ee hadda la heli karo: 1.5 ”, 1.8”, 2.4 ”, 2.8”, 3.5 ”, 4.3”, 5 ”, 7”, iwm.
* Wareejinta Reed
* FLASH lagu dhex dhisay
* Bateriga Lithium-ka lagu dhex-dhisay
* USB gudbinta ku shubida
Buug-yaraha fiidiyowgu wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
1. Daboolka buug-yaraha waxaa u habeeyay macaamilka.
2. Fiidiyowga gudaha waxaa beddeli kara macaamilka si madax-bannaan.
3. Sababtoo ah waxay leedahay hawsha keydinta ee USB flash drive-ka, marka dadku aad ayey ugu diyaar noqon doonaan inay xafidaan waana wax ku ool ah.
1. Qaabka hawlgalka:
Beddel otomaatig ah (badhanno kuma yaal buug-yaraha)
Si otomaatig ah ayuu u ciyaarayaa markaad daarto buug-yaraha oo aad xidho markii aad xidho.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah badhannada shaqada si waafaqsan shuruudahaaga, sida: ciyaar, joogsi, hakad, mug, iwm.
2. Habka lacag bixinta:
Khadadka caadiga ah ee USB si loogu xiro kombiyuutarka
3. Beddelka fiidiyowga:
Waad ku xidhi kartaa buug-yaraha fiidiyaha kombiyuutarka adoo adeegsanaya khadka USB-ga, waxaad ka heli kartaa diskka laga saari karo ka dibna waad beddeli kartaa, tirtiri kartaa ama ku soo dejin kartaa fiidiyow kasta buug-yaraha fiidiyowga oo u dhaqmi kara sida isla USB caadi ah.
Isticmaalka iyo suuqa
Marka la eego kala-soocidda buug-yaraha, waxaa badanaa loo isticmaalaa xilliyada soo socda:
Tusaale ahaan, Maalinta Hooyada, Maalinta Kirismaska, Maalinta Jacaylka, dhalashadeeda, iwm. Naqshadaynta xeel-dheer iyo duco diirran oo fiidiyowga ku jirta ayaa gudbinaya dareenka lama ilaawaanka ah.
Tusaale ahaan, xayeysiinta gaariga iyo badeecada, dhiirrigelinta iibka, dhiirrigelinta isbitaalka, dhiirrigelinta hoteellada, iwm, buug-yaraha fiidiyowga ayaa ka talin doona suuqa kaararka fiidiyaha. Markaad macaamiishaada siiso buug yar oo fiidiyow ah oo hal abuur leh, waxay noqon doontaa mid macno badan isla marka aad furto waxayna ku socotaa fiidiyowga ama fiidiyowga xayeysiinta ah ee shirkadda si ay u bixiso rajo wanaagsan.
Tusaale ahaan, casumaadda xafladda dhalashada, casuumaadda arooska, iwm. Waxay muujin kartaa dhadhanka iyo buundooyinka qofka.
Tusaale ahaan, sanad guurada, xuska qalin jabinta, iwm, runti way soo celin kartaa muuqaalka waagaas waxayna leedahay qiimo aad u xusuus badan aruurinta. Buug-yaraha fiidiyowgu wuxuu nolosheenna la gelayaa iyadoo leh muuqaal gaar ah oo hodan ah!